Ukukhiqizwa kwe-liposome ye-Ultrasonic nezinzuzo zayo - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic liposome nezinzuzo zayo"
I-liposome iyi-vesicle eyindilinga okungenani ne-lipid bilayer. AmaLiposomes asetshenziswa kabanzi njengezimoto zokulethwa kwezidakamizwa kanye nezakhi zomzimba. Ngenxa yokwakheka nosayizi wayo, ama-liposomes anikeza i-bioavailability enkulu nesilinganiso sokumunca emzimbeni. I-Sonication iyindlela ekhethiwe yokulungiselela ama-liposomes alayishiwe, njengemincane, i-unilamellar vesicles (SUV) ene-diameter ebangeni le-15-50nm noma elikhulu, i-multilamellar vesicles (LMV) enobukhulu obunobubanzi obungu-120-140nm. Iningi lama-liposomes lakhiwa ama-phospholipids, isib. Phosphatidylcholine, kepha amanye ama-lipid, anjengeqanda phosphatidylethanolamine, nawo asetshenziswa ngempumelelo, uma esebenzisana nesakhiwo se-lipid bilayer.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angamathuluzi athembekile ukukhiqiza ama-liposomes nano-sized futhi enze imikhiqizo ye-liposomal. Ukuqinisekisa ukuphindukuzalwa kanye namazinga aphezulu kakhulu wemikhiqizo ye-liposomal, ama-Hielscher ultrasonicators angalawulwa ngokuqondile. Amapharamitha wenqubo ebaluleke kakhulu we-ultrasonic anjenge-amplitude, isikhathi, izinga lokushisa, nengcindezi angabekwa ngqo futhi aqashwe. Ikhadi le-SD elihlanganisiwe lisebenza ngokuzenzakalelayo ngamapharamitha e-ultrasonic futhi lisize ukuzalwa kabusha kwalapho kanye nokulawulwa kwekhwalithi.
Funda kabanzi ngokusetshenziswa kweprosesa ye-ultrasonic ukulungiselela ama-liposomes!